အငယ်တန်းစာရင်းကိုင်၊ စာရင်းကိုင် Jobs in Myanmar
အငယ်တန်းစာရင်းကိုင်၊ စာရင်းကိုင် အလုပ် 37 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ထိပ်တန်း အငယ်တန်းစာရင်းကိုင်၊ စာရင်းကိုင် အလုပ်အကိုင်များ။ Alote.com.mm တွင် နောက်ဆုံး လစ်လပ်နေရာများအတွက် အလုပ်ရှင်များထံ တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားပါ။
- Expense Claimများစစ်ဆေးရမည်။ - Daily Cashများနေ့စဥ်စာရင်းလုပ်ရမည်။ - Chief Accountantအား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ - လစဉ်အစီရင်ခံစာ၏ဒေတာများကိုပြင်ဆင်ရမည်။ - ဌာနခွဲများမှ အစီရင်ခံစာကို စစ်ဆေးရမည်။ - နေ့စဥ်Payable & Receivableစာရင်းကို စစ်ဆေးရမည်။
1. Expense Document များ စစ်ဆေးခြင်း။ 2. Financial Record Keeping များ ပြုလုပ်ခြင်း။ 3. စာရင်း နှင့် Account (Auditing ) များ စစ်ဆေးခြင်း။ 4. Statement များ ထုတ်ပေးခြင်း။ 5. Bank Transaction များ ပြုလုပ်ပေးခြင်း။
• ဓာတ်မြေသြဇာ၊ ကုန်ကြမ်းဝယ်ယူမှုနှင့် တောင်သူလယ်သမားအားadvanced ငွေပေးချေမှုများကို excel တွင် မှတ်တမ်းတင်ရမည်။ • ဓာတ်မြေသြဇာ အရောင်းမှတ်တမ်းနှင့် ကုန်ကြမ်းဝယ်ယူ စာရင်းကို Tally တွင်မှတ်တမ်းတင်ရမည်။ • farmer statementကို excel တွင်ပြင်ဆင်ရမည်။ • ဘောက်ချာများနှင့် ဖောင်များနှင့်အတူ ထုတ်လုပ်မှု အစီရင်ခံစာတစ်ခုလုံးကိုexcelတွင်နေ့စဉ်မှတ်တမ်းတင်ရမည်။ • Check raw purchasing stocks, semi-finished goods and finished goods in Tally .• Receive and payment vouchering. • Record Export & Domestic finished product record in excel. • In turn helping to cashier in payment for daily labor. • Prepare Labor consumption, usage in processing. • Prepare production accessories usage. • Check the operation department budget (seasonal , monthly , weekly) • Calculate the costing
လစဉ် စာရင်းချုပ်များကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ Finance Manager ကိုတင်ျပရမည္ Cashier အား စာရင်းပေးခြင်း၊ Customer ထံမှ ရရန်အကြွေးရှိသည့် အခြေအနေအား Software Balance (Sale) နှင့် Software Balance များအား Check ပြုလုပ်ခြင်း
Golden Family Trading
-Financial Statement ဆွဲနိုင်ရမည်။ -Computer သုံးတက်ရမည်။ -ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ -လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရမည်။ -ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။
(1)တက္ကသိုလ် တခုခုမှ ဘွဲ့ရပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ (2)LCCI Level (2)အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ (3)Computer Excel,Email & internet ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ (4)စာရင်းပိုင်းအားစိတ်ဝင်စား၍ တိကျသေချာစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရမည်။
Junior Accountant (MDY)
လက်ခံရရှိသောအကောင့်များကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပြီး ပြေစာများထုတ်ပေးရမည်။ နေ့စဥ်ငွေပေးချေမှုနှင့် ပြေစာဘောက်ချာကို ပူးတွဲပါ လက်မှတ်အပြည့်အစုံဖြင့် ရေးရမည်။ နေ့စဉ် ငွေသွင်းငွေထုတ်စာအုပ်ရေးရမည်။ ဘဏ်နှင့် ဖောက်သည်ထံမှ ငွေသား/ချက်လက်မှတ် စုဆောင်းပြီး ထုတ်ယူရရမည်။ Senior Accountant ၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် အလုပ်လုပ်ရမည်။ ဌာနမှူးထံ နေ့စဉ်နှင့် လစဉ် အစီရင်ခံစာရေးရမည်။ နေ့စဉ် ငွေသားလက်ကျန်နှင့် ဘဏ်လက်ကျန်များကို စစ်ဆေးခြင်း stock များကို လစဉ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ ဌာနမှူးမှ ပေးအပ်သော အခြားတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: performance ပေါ်မူတည်ပြီး rewardများရမည်။
- ကွန်ပျူတာ Excel ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။လိုအပ်ပါက နယ်ရုံးခွဲများသိုသွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ - လုပ်သက် (၂နှစ်)အထက်ဖြစ်ရမည် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်။ - စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။
- အရောင်းစာရင်း အ၀ယ်စာရင်းများကို သေချာစီစစ်ပြီး စာရင်းပြုစုနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ - လက်ခံရရှိနိုင်သော အကောင့်များကို Updateလုပ်ပြီး ပြေစာများထုတ်ပေးရမည်။ - တရားဝင်နှင့် ကုမ္ပဏီစာရင်းကိုင်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ လက်ကျန်ရှင်းတမ်းများ၊ ဝင်ငွေရှင်းတမ်းများနှင့် အခြားဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကူညီပေးရမည်။ - ကုန်ကျစရိတ်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် အချက်အလက်များ တိကျမှန်ကန်ပြီး လိုအပ်သည့်အခါ ချက်ချင်းရရှိနိုင်ရန် Database တွင် ဘဏ္ဍာရေးဒေတာကို Updateအမြဲကူညီပေးနိုင်ရမည်။ - အပတ်စဉ် / လစဉ် Report များကို အချိန်မှီ တင်ပေးနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ - လစဉ်/နှစ်ပိတ် စာရင်း ပြင်ဆင်ရာတွင် အကြီးတန်းစာရင်းကိုင်များအား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ * Senior Accountant သို့မဟုတ် Chief Accountant မှပေးအပ်သော အခြားတာဝန်များကို ကူညီလုပ်ဆောင်းပေးနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်
အမရပူရ | မန္တလေးတိုင်း မန္တလေးတိုင်း
Ledger အဝင်သွင်းရန်။ ကုန်ပို့လွှာဖြတ်ပေးရန်။ လေဘာ ချေးများအား ထွက်ပေးရန်။ နေ့စဉ်ကုန်အဝင် အထွက်ဆရင်း ရေးပးနိုင်ရမည်။ Daily Report တင်နိုင်ရမည်။ နေ့စဉ် computer တွင် ဆရင်းသွင်းပးနိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: Reward for over performance
- Daily payment voucher များရေးခြင်း - Banking process များလုပ်ဆောင်ပေးခြင်း - Payment receipt များ ဖိုင်တွဲခြင်း - Cash collect များလုပ်ဆောင်ပေးးခြင်း - Other process များလုပ်ဆောင်ပေးခြင်း - Account Manager အား Assist ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
အကျိုးအမြတ်: - Meal allowance - Ferry provided - Overtime payment
- MS Office Software (Word,Excel,Power Point,Outlook) ၊ E-mail ၊ Myanmar နှင့် English Typing ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - Daily Cash Book Entry ပြင်ဆင်ရမည်။ - Supplier မှ Daily Payment များကို ပြင်ဆင်ရမည်။ - နေ့စဉ် ငွေဝင်၊ ငွေထုတ်၊ နေ့စဥ် ငွေစာရင်းကို စစ်ဆေးရမည်။ - ကြိုတင်ငွေတောင်းခံမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များကို စစ်ဆေးနိုင်ရမည်။ - အပတ်စဉ် Bank Balance & Bank Process ကိုစစ်ဆေးရမည်။ - Senior Accountant သို့ အပတ်စဉ် ကြိုတင်သတင်းပို့နိုင်ရမည်။ - ဖိအားများအောက်တွင် အလုပ်လုပ်နိုင်ရမည်။
- စာရင်းကိုင်ဌာနသို့ နေ့စဉ် အရောင်းအဖွဲ့ဖြင့် ရောင်းချသော အရောင်းပြဿနာကို ထိန်းချုပ်ရန် စာရင်းကိုင်ဌာနသို့ သတင်းပို့ပါ။ - Inventory List Update ကိုနေ့စဉ်။ - မြေပြင်စတော့ကို ၃လတစ်ကြိမ် စစ်ဆေးခြင်း။ - နေ့စဉ်နှင့် လစဉ် W/H အကောင့်ကို လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။
အကျိုးအမြတ်: Ferry ,Uniform
အကောင့် Receivable နှင့် Payable တွင် အတွေ့အကြုံကောင်း စတော့စာရင်းသွင်းမှု၊ ငွေသားစီးဆင်းမှု၊ ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်း၊ AR ထိန်းချုပ်မှုတွင် အလုံးစုံ စီမံခန့်ခွဲခြင်း။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ အာရုံစူးစိုက်နိုင်ခြင်း၊ လျှို့ဝှက်ထားနိုင်မှုမြင့်မားသော ဖိအားကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။
- Sale Invoice , Voucher များအား Software တွင်သွင်းခြင်းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည္ - ဌာန ပေါင်းစုံမှ Expenses များကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုရှိမရှိ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရမည္ - စာရင်းခေါင်းစဉ်များ၊ Analytics Accounts Heading များခွဲခြမ်းရာတွင် သတိပြုဆောင်ရွက်ရမည္ - လစဉ် စာရင်းချုပ်များကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ Finance Manager ကိုတင်ျပရမည္ - General Ledger တစ်ခုလုံးမှန်ကန်မှုရှိစေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း - Suspense Account များမှန်ကန်မှုရှိစေရန် လစဉ်စစ်ဆေးခြင်း - Credit Sale နှင့် ရောင်းထားသည့် စာရင်းများအား Customer နှင့် တိုက်စစ်ပြီး - Cashier အား စာရင်းပေးခြင်း၊ Customer ထံမှ ရရန်အကြွေးရှိသည့် အခြေအနေအား - တခါတရံ Customer တစ်ဦးချင်းစီ၏ Account များ Sale (or) Customer သို့ထုတ်ပေးခြင်း - Machine Installment များ Due Date ပြည့်သည့်အခါ Customer ထံသို့ ဖုန်းဆက်ပြီး - Software Balance (Sale) နှင့် Software Balance များအား Check ပြုလုပ်ခြင်း - နယ်ရုံးခွဲမှအသုံးစရိတ်များကို Junior Accountant ထံမှစာရင်းများပုံမှန်စစ်ဆေးဖြည့်သွင်းခြင်း - နယ်ရုံးခွဲ၏ လစဉ်စရိတ်၊အကြွေးစာရင်းအစရှိသည်များကိုပုံမှန်စစ်ဆေး၍ Finance Manager ကိုတင်ပြခြင်း